Manage ako Mac mafaera zviri nyore neMarta | Ndinobva mac
Manuel Alonso | 20/07/2021 22:00 | Zvimwe Zvirongwa zveMac
Marta muongorori wefaira ane mapaneru maviri. Chiri nyore asi chishandiso chinoshanda icho iwe une maviri makoramu ekuti utarise mafaera ako, uye inogona kuve mune imwe dhairekitori mukoramu imwe neimwe. Yakagadziridzwa munaZvita 2020, mugadziri wayo anoti hapana akawanda akanyanya nhau dzinokosha nenzira inooneka asi mukati, chii chinoita kuti ishande kwazvo. Shanduro 0.8 yave kuwanikwa.
Kunyangwe isingaunze akawanda maficha maficha, iyi vhezheni 0.8 yeMarta, izere neshanduko dzemukati yakagadzirirwa kubvumira ramangwana reapp kuti rirambe riripo. Iyo fileystem dura ndiyo musimboti, saka inofanira kunge yakagadzikana, inoshanda, uye inowedzerwa. Nepo kuitiswa kwekare kwanga kusisina makuru ekuvhiringidza, kwanga kusiri kwakanaka munzira dzakawanda:
Faira kubviswa kwaive kwakaomarara uye kwaitsamira pane imwe faira system. Dzimwe nguva ruzivo rwakawandisa nezve mafaera akaunganidzwa pasina chikonzero chakati. Naizvozvo, musiki wayo Yan, ndakafunga kunyorazve iro rese faira system kubva pakutanga neruzivo rwaakawana mukati memakore ekupedzisira aya.
Iye zvino ese mashandiro efaira ayo system senge izvi zvinopihwa zviri pachena Zvese zvirikuenderera mashandiro vanomhanya zvega mu tambo yevashandi. Nekudaro, isu hatidi kuchinja tambo isu pachedu: Marta achakuitira iwe. Zvakare sarudzo yakanaka yawedzerwa: Panzvimbo pekukanda zvikanganiso, nzira dzinogona kutadza kudzosa mibairo yakawanda.
Marta chikumbiro macOS yemuno yakanyorwa zvizere muSwift. Kwete chete iyo inobvumidza kune yemuno chiitiko, iyo app zvakare inokurumidza kusimba. Izvo hazvitore kana kutengesa data redu. Iko hakuna kuvanzika mashandiro kana kumashure masuo. Uye hazvingambove zvakadaro, zvirinani ndizvo zvinotaurwa nemusiki waro uye mushure menguva yakareba mumusika hazvina kumbobvira zvakakonzera matambudziko. Shanda nemafaira pamwe nemaforodha. Marta anovhura onyora ZIP mafaira uye anovhura RAR, 7Z, XAR, TAR, ISO, CAB, LZH uye mamwe akawanda mafomati.
Iyi purogiramu yemahara uye iwe unogona kuitora kubva pano
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac zvirongwa » Zvimwe Zvirongwa zveMac » Manage ako Mac mafaera zviri nyore neMarta
Kuwedzera kweApple Pay kunoenderera uye ino nguva muRussia